Iprofayile - iShanghai DaDa Electric Co, Ltd.
Yasekwa ngonyaka ka-1986, SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD yamkelwa njengenye yezona zinto zihloniphekileyo kwilizwe liphela kunye nabathumeli bamandla ombane aphantsi UMEPHULI WOJIKELEZO e China.
Umzi-mveliso wethu ukhokele ekusebenziseni iNkqubo eyi-IS09001 yoLawulo loMgangatho. Iimveliso ezininzi ziqinisekisiwe phantsi kwesiqinisekiso samazwe aphesheya, njengeI-CB, i-CE, iCCC, iSEMKO, KEMA, ASTA, neROHS.
Okwangoku, sivelisile kwaye sathumela ngaphandle iimveliso ezingaphezu kwe-160, zinezixhobo zombane eziphantsi zombane kubandakanya zonke iintlobo zeeSekethe eziDilikayo, iiSwitshi, kunye neziXhobo zoMbane njl. inethiwekhi yokuthengisa ifikelela UMzantsi Mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, Mzantsi Melika, iAfrika neYurophu.
Unikezelo oluthembekileyo lonyaka lwesekethe
Ishishini elingaphezulu kwama-30 lokuthumela ngaphandle
· Yasekwa ngo: 1986;
· Amava e-OEM kunye ne-ODM: Ngaphezulu iminyaka;
Iziphumo zonyaka: 3,000,000 abaqhubi besekethe;
Imveliso yonyaka ye-MCB: 2,000,000 iikhompyutha;
Imveliso yonyaka yeNdibano ye-MCCB: 900,000 iikhompyutha;
Ubungakanani befektri: 50,000 m2;
· Oomatshini abaziqhubayo: 100 iiseti;
· Oomatshini bokuHlola uMgangatho: 50 iiseti;
· Iinjineli Zobuchwephesha: 32 abasebenzi;
Ulwakhiwo lokwoneliseka kwabathengi kweeprojekthi ezisemgangathweni, ukwenza imeko elungileyo yoluntu; Ukuphucula inkqubo yokuqinisekisa ukhuseleko, ukukhuthaza ukuphuculwa okuqhubekayo kolawulo lweshishini.
Ulawulo olulungileyo lokholo, ukulahla iimveliso ezintle, ukuzinikela eluntwini, ukuxhamlisa abasebenzi.
Cinga ngakumbi kubathengi kwaye wenze ngcono kumthengi